Madaxweynaha Ismaamulka Somalida oo la Filayo in Arbacada la Magacaabo – Rasaasa News
Jul 14, 2010 Madaxweynaha Ismaamulka Somalida oo la Filayo in Arbacada la Magacaabo
Wasiirka amniga, ahna siihayaha Madaxweynaha Ismaamulka Somalida Cabdi Maxamed Cumar, ayaa la filayaa in uu noqdo madaxweynaha cusub ee Ismaamulka Somalida, oo lagu dhawaaqidoono maalinta bari ah.
Warar aad ugu dhadhaw xarunta dhexe ee baarlamaanka dawlad degaanka Somalida ee Sayid Maxamed Cabdile Xasan, ayaa noo xaqiijiyey in baarlamaanka dhexdiisa aad loo hadal hayo in Cabdi Maxamed Cumar uu noqon doono madaxweynaha Ismaamulka Somalida ee shanta sano ee soo socota.
Cabdi Maxamed Cumar, ayaa waxaa uu ka mid ahaa dadkii siyaasada Ismaamulka Somalida soo galay doorashadii tan ka horaysay sanadkii 2005. Xiligaa wixii ka dambeeyeyna Cabdi waxaa uu ka mid ahaa raggii saddex ah ee iyagu ugu kurkurka roonaa awooda degaan Somalida.
Cabdi waa ninka kaliya ee hogaankii loo magacaabay aan mar qudha laga badalin, runtiina waxaa uu ahaa ninka ay awooda degaanka oo dhan gacantiisa ku jirtay. Hadii ay guuli u soo hoyatay iyo hadii ay guuldaro u soo hoyatay Ismaamulka Somalida Cabdi waa dadka ay tooska u taabanayso.
Wararkan oo hordhac ah oo aan si hoose caawa ku helay ayaa loo badinayaa in Cabdi uu noqondoono madaxweynaha cusub, waxaa kale oo dhici karta in uu soo baxo isbadalka la sugayo mid ka gadisan.
Waxaa xiligan ku sugan xarunta dawlad degaanka Somalida Jabhada UWSLF oo heshiis qaadatay iyo wafti hordhac ah oo ka socda Jabhada ONLF. Dadweynaha qurba joogta ah iyo kuwa ku nool degaanka Somalida ayaa waxay jeclaan lahaayeen in ay arkaan isbadal wayn oo siyaasadeed oo ku yimaada dhulka Somalida Ogadeeniya, madaama ay xiligan jirto dabayl nabadeed.
Wixii ka soo kordha isbadalada maamulka iyo waliba wadahadalada nabada wararka dakmbe ayeynu kaga boggan doonaa.